ज्वाला रंगीन, इलेक्ट्रिक स्पार्कलर, आगो पाउडर क्याम्पि - - वी शेng
जादुई रंग आगो
वी Sheng नयाँ सामग्री टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड 2019 मा स्थापित भएको थियो, Hengshui शहर, हेबै प्रान्त, नजिकैको बेइजि मा स्थित छ। हामी मुख्य रूप मा जादू रंग ज्वाला पाउडर निर्यात, हामी यो उत्पादन गर्न हाम्रो आफ्नै कारखाना छ। हामी एक पेशेवर निर्माता र जादुई रंग आगो पाउडर को निर्यातक हो र हामी जादुई रंग आगो ब्यापार र आर एन्ड डी को एकीकरण को आतिशबाजी व्यापार मा संलग्न भएको छ, धेरै बर्ष को लागी उत्पादन।
जादुई रंग ज्वाला पाउडर के हो? धेरै मानिसहरु यो उत्पादन को लागी परिचित छैनन्। यो एक नयाँ आइटम हो, यो सुरक्षित र पर्यावरण को अनुकूल छ। यो Bonfire पार्टी, Camfire पार्टी, इनडोर परिवार पार्टी र समुद्र तट पार्टी को लागी प्रयोग गरीन्छ। । यो कुनै पनी काठ को आगो मा रंग ज्वालाहरु लाई जोड्न को लागी प्रयोग गरीन्छ, उनीहरु हामीलाई एक राम्रो रंग आगो ल्याउन सक्छन्, तपाइँ एक फरक शानदार प्रदर्शन दिन सक्नुहुन्छ!
वी Sheng नयाँ सामग्री टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड 2019 मा स्थापित भएको थियो, Hengshui शहर, हेबै प्रान्त, नजिकैको बेइजि मा स्थित छ। हामी एक पेशेवर र विश्वसनीय निर्यातक हो। हामी मुख्य रूप मा जादू रंग ज्वाला पाउडर निर्यात र यसलाई उत्पादन गर्न।
हामी उत्पादनहरु को गुणहरु मा जारी र सख्ती बाट उत्पादन प्रक्रियाहरु नियन्त्रण, सबै प्रकार को निर्माण को लागी प्रतिबद्ध।
हाम्रा उत्पादनहरु राम्रो गुणस्तर र क्रेडिट हामीलाई हाम्रो देश मा धेरै शाखा कार्यालयहरु र वितरकहरु लाई स्थापित गर्न सक्छौं।
चाहे यो पूर्व बिक्री वा बिक्री पछि हो, हामी तपाइँलाई थाहा छ र हाम्रो उत्पादनहरु लाई अधिक छिटो प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्दछौं।
ज्वाला परिवर्तक पाउडर
क्याम्प फायर पाउडर
जादुई ज्वाला रंगीन
BBQ आगो लाइटर सेतो हेक्सामाइन ठोस ईन्धन
ठेगाना:Shanpu जोन, Raoyang काउन्टी, Hengshui शहर, हेबै चीन
नि: शुल्क फोन: +86 18630173657
नीलो ज्वाला रंगीन
हामी सबैलाई थाहा छ, काठ मा ज्वाला सामान्यतया पहेँलो हुन्छ र सामान्य रंग को लागी सम्बन्धित छ, ज्वाला पहेँलो वा थोरै रातो हो, जो मानिसहरु परिवार हुन् ...
केक मोमबत्ती आतिशबाजी
केक मैनबत्ती आतिशबाजी पनि सानो हातमा आयोजित आतिशबाजी भनिन्छ। जब प्रयोग मा, उनीहरु केक मा सम्मिलित छन् (वा तपाइँको हात मा बन्द सेट) र w को प्रज्वलित ...